Fanilikilihana vokatry ny covid-19 :: Iharan’ny fitsarana ivelany ireo mpiasan’Ambatovy sy ny havany • AoRaha
Fanilikilihana vokatry ny covid-19 Iharan’ny fitsarana ivelany ireo mpiasan’Ambatovy sy ny havany
Misedra ny mafy noho ny safobemantsina! Mitoroka ny fanilikilihana mihatra an’ireo mpiasan’Ambatovy sy ny fianakaviany ny sendika Fisema ao amin’io orinasa io. Tao anatin’ny fanambaràna nataon’ izy ireo no namariparitany ny sedra iainan’ireo mpiasa ireo any anaty fiarahamonina, taorian’ny fisian’ireo trangana valanaretina coronavirus voatily avy tamin’ny mpiasa vitsivitsy tao amin’io orinasa mpamokatra Nikela sy Kôbalta io.
Manahirana hatramin’ny fitadiavana trano ipetrahana ho an’ireto mpiasa sasany ireto, satria matahotra sy mandà azy ireo avokoa ny olona, vantany vao mahafantatra fa mpiasan’ Ambatovy ry zareo, araka ny nampitain’ny Fisema hatrany. Nampahatsiahivin’iretsy farany anefa ny “fanarahan’ny orinasa ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny lafiny ara-pahasalamana, hentitra sy avo lenta, nanomboka tamin’ny nahatongavan’ny valanaretina teto Madagasikara ka hatramin’izao ”.
Voamarik’ity sendika ity ihany koa ny tsy niasan’ny ankamaroan’ny mpiasan’Ambatovy, nanomboka tamin’ny 24 marsa 2020 sy ny fitsaharan’ny famokaran’ny orinasa, tamin’ny 6 avrily 2020.
Nisy ny fizarana ny tambavy Covid-organics na CVO ho an’ ireo mpiasa tany an-toerana, avy eo narahin’ny fidinana ifotony nataon’ny minisitra ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika. Mpiasa dimampolo amby zato sisa no manao ny fiandrasan-draharaha ao Ambatovy Toamasina. “ Efa natoka-monina avokoa izy ireo fa tsy mahazo mivoaka any amin’ny fiaraha-monina intsony”, hoy Ravokatra Fidiniavo, minisitry ny Harena an-kibon’ny tany.
Miisa dimanjato sy telo arivo ny mpiasa raikitra ao Ambatovy. Enina arivo mahery kosa ireo mpiasa an-tselika.
Toetrandro :: Ho maina ato anatin’ny telo andro
Kojakoja fiarovana :: Mitobaka ny aron-tava tsy manaraka fenitra ara-pahasalamana